Mogadishu Journal » 2018 » September » 4
//September 4, 2018
Askar ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu dilay Muqdisho
Mjournal :-Rag hubeysan ayaa Waaxda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan waxa ay galabta ku dileen Afar askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay Idaacadda Risaala u sheegeen masuuliyiinta degmada Kaaraan. Masuul ka ttirsan degmada Kaaraan oo ina hadlay ayaa...
Khudbadii uu madaxweyne Farmaajo ka jeediyay shirka madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa qudbad dheer ka jeediyay shirka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika isagoo ku tilmaamay shirka inuu yahay mid taariiqi ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha iyo Xoghayaha...
Xaaf Al-shabaab waxey afduubteen 70 oday
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in ku dhawaad 70 oday ay Shabaab ka afduubteen maanta deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, islamarkaana ay la aadeen degmada Ceelbuur oo ay ku sugan yihiin Shabaab. Madaxweynaha maamulka Galmudug...
Mudane ka tirsan Golaha Shacabka oo Dhuusa-Mareeb lagu doortay
Mjournal :-Magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa goor dhow lagu soo gabagabeeyay kursi ka mid ah Kuraasta ka banaan Golaha Shacabka doorashadiisa. Kursigaan ayaa horay waxaa u baneeyay Cabdulqaadir Gaafoow Maxamuud, waxaana maalin ka hor doorashadiisa ku dhawaaqay...
Shirka Madaxda D/Goboleedyada oo ka furmay Kismaayo
Mjournal :-Magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ah Jubbaland waxaa ka furmay shirka madaxda maamul goboleedyada, kaasi oo ah mid xasaasi ah. Madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland ,Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa Shirka ku sugan. Shirka ayaa qorshishiisa...
Kulanka guddiga amniga oo looga hadlay qodobo dhawr ah
Mjournal :-Kulanka todobaadlaha ah ee guddi hoosaadka amniga golaha wasiirrada oo uu shir guddoomiyay Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, dib-u-habaynta ciidanka iyo dardar-gelinta diiwaan-gelinta...
Mjournal :-Waxaa si rasmi ah magaalada Beijing uga furmay Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika oo kulmisay 53 qaran oo Afrikaan ah, Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika. Waddanka Shiinaha, oo ka duulaya xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo xiriirka Shiinaha iyo Afrika ayaa waxa uu...
Mjournal :-Hay’adda ugu sarreysa kubadda cagta ee FIFA ayaa ku dhawaaqday magacda ciyaartooyda isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu fiican caalamka (FIFA The Best) isreereeb dheer kaddib. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah Iyo Luka Modric ayaana la soo doortay kuwaas oo...
Wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Kismaayo iyo Shirka maamul goboleedyada
Mjournal :-Magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ah Jubbaland maanta waxaa ka furmaya shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada, kaasi oo ah mid xasaasi ah. Madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa ku wada sugan magaalada Kismaayo,...